Varairidzi veKumaruwa Voyambira Kuramwa Kwavo Mabasa
Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe
Sangano revarairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, razivisa hurumende neMuvhuro nezvenhengo dzaro dziri kuda kuramwa mabasa pamusoro pekukundikana kwePublic Service Commission kuzivisa mazuva achabhadharwa vashandi vehurumende mabhonasi egore rapera.
Munyori mukuru wesangano iri, VaRobson Chere, vanoti vasvitsa gwaro rinopa mazuva gumi nemana kumahofisi emukuru wePublic Service Commission, kugurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugurukota rezvedzidzo yepasi.
VaChere vanoti kukundikana kwavo kunzwa kubva kuhurumende mukati memazuva gumi nemana aya nhengo dzavo dzinozoramwa mabasa.
Zvinonziwo masangano anomirira vashandi haasi kuwiriranawo pamatanho ekutora pamusoro pekuti vawedzerwe mihoro, vamwe vachinzi vari kuti hazvibatsire kutora matanho iyo hurumende yacho iri kutotadza kuvabhadhara mabhonasi avo uye mihoro yavo paine nguva.
Musangano wakaitwa svondo rapera pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende pamusoro pemari dzemabhonasi unonzi hauna chawakaburitsa sezvo vashandi vakaramba kutambira zvose zvaive zvaiswa patafura nehurumende.
Hurumende inonzi yakati ichadzoka nemhinduro musi wa20 mwedzi unouya, asi mamwe masangano evashandi anoti uku kudakutenga nguva chete kuri kuitwa nehurumende.